“Hetsika Mandio”: Voasambotra ny olona 66 tafiditra amin’ny “Raharaha kidnapping” | NewsMada
“Hetsika Mandio”: Voasambotra ny olona 66 tafiditra amin’ny “Raharaha kidnapping”
Misy ny vokatra navoakan’ny zandary amin’ny “Hetsika Mandio”. Maromaro ny olona tratra amin’ny asan-dahalo, fakana an-keriny. Mitohy ny hetsika…
Tao anatin’ny “Hetsika Mandio” ataon’ny zandarimaria, voasambotra ny olona 66 tafiditra amin’ny fanaovana kidnapping. Tany amin’ny faritra Betsiboka, Alaotra Mangoro, Boeny, Sofia ary Analamanga ny nahasamborana ireo olona ireo. Ny 61 tamin’ireo, tafiditra amin’ny fanafihana mitam-piadiana ihany koa.
Ankoatra ireto olona ireo, mbola hanaovana famotorana, voasambotry ny zandary tao anatin’ny hetsika ihany koa ny dahalo 27. Miisa 25 ny fanafihan-dahalo tamin’izany. Omby 428 ny very ka efa tafaverina ny 70 isan-jaton’ireo.
Mitohy hatrany ny hetsika amin’ny faritra maro. Miparitaka ireo zandary ireo, ary amin’ny asan-jiolahy rehetra no anaovany ny hetsika fa tsy amin’ny ady amin’ny dahalo ihany. Anisan’izany ny fahatrarana kamiao nitondra vato tsy ara-dalàna milanja 15 taonina teny Ambohimalaza ny asabotsy lasa teo. Anatin’ny “Hetsika Mandio” avokoa izany, ny fisavana fiara, sns. Ny faharetan’ny hetsika no andrasan’ny olona. Takin’ny vahoaka ny hahatsapa bebe kokoa ny vokatra mivaingana, mihena ny asan-jiolahy, ny famakiana fasana, ny asan-dahalo. Raha mbola miaina amin’ireo ny olona, na maro aza ny isa avoakan’ny mpitandro filaminana, tsy midika inona amin’izy ireo izany.